.: သစ္စာ+ဝဋ်ကြွေး+ကျိန်စာ = Valentine
Valentine’s Day “ချစ်တဲ့များနေ့”လို့ ချစ်တတ်သူတိုင်းက သတ်မှတ်ကြတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၄)ရက် နေ့ကတော့ သစ္စာရှိစွာနဲ့ တစ်နှစ်တစ်ခါ ရောက်လာတတ်ပေမယ့် ကျွန်မကို မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးသွားတဲ့ သူ တစ်ယောက်ကတော့ နှစ်အတန်ကြာသည့်တိုင်အောင် ယနေ့ထိ ကျွန်မထံသို့ ရောက်မလာခဲ့ပါ။
ကျွန်မကတော့ လွန်ခဲ့သော(၃)နှစ်ကျော်ကတည်းက နှစ်စဉ်မှန်မှန် Valentine’s Day ရောက်တိုင်း ဒီနေရာလေးမှာ ကျွန်မမျှော်လင့်နေသူရယ်၊ သူယူလာပေးမယ်ဆိုတဲ့ Chocolate ဗူးလေးနဲ့ ပန်းစည်းလေးတွေကို ဝီရိယ ကောင်းကောင်းနဲ့ သစ္စာရှိစွာ စောင့်မျှော်နေဆဲပါ .....။
ကျွန်မတို့အိမ်မှာ Computer စဝယ်တဲ့နေ့ကဆိုကြပါစို့။ COMPUTER ကုမ္ပဏီ၏ Promotion Card ပြားလေးအရInternet သင်တန်းအခမယ့် တက်ခွင့်ရခဲ့လေသည်။ ကျွန်မသည် ကျောင်းပြီးကတည်းက Tour ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်စဝင်ခဲ့သည်မှာ ခုဆိုရင်တစ်နှစ်နီး ပါးရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်းInternet အသုံးပြုနည်းများကို ကျွန်မ၏ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ကောင်းစွာ အကျွမ်းမဝင်ခဲ့ပါ။ ယခုတော့ “ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျ”ဆိုသလို ကျွန်မ၏ဆန္ဒများ ပြည့်ဝတော့မည်ဖြစ်သည်။
Apple Computer Servic & Trainning Centre နာမည်ကြီး COMPUTER ဝယ်ယူသူများနှင့် သင်တန်းသားများ နေ့စဉ်မပြတ်စည်ကားနေသော CENTRE တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုဖွင့်လှစ်သော e.mail & internet သင်တန်းမှာ ဤကုမ္ပဏီ၏ CUSTOMER များသာ တက်ခွင့်ရသော သီးသန့်သင်တန်း ချိန် ဖြစ်သည့်အတွက် ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများနှင့် လူလတ်ပိုင်းတချို့စသဖြင့် အရွယ်မျိုးစုံ လာရောက်သင်ယူကြသည်။Sectionတစ်ခုလျှင် သင်တန်းသား (၂၀)ဦးသာလက်ခံပြီး COMPUTER တစ်လုံးချင်းစီဖြင့် အေးချမ်းစွာသင်ကြားနိုင်သည်။ သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ္တပတ်(၂) ပတ် ဖြစ်သည်။
ယနေ့ ကျွန်မသင်တန်းတက်သည့် လေးရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းချိန်အတွင်း ကျွန်မ၏ MAILBOX ထဲသို့ ထူးခြားသောစာတစ်စောင်ဝင်ရောက်လာပါသည်။
“ဒီနေ့ မင်းအရမ်းလှနေပါလားကြည်ပြာ၊ မင်းမျက်ဝန်းလေးတွေရဲ့ ဖမ်းစားမှုကြောင့် ငါ အိပ်မပျော်တာ (၃)ရက်ရှိနေပြီ”တဲ့။
ဟင် ဘယ်လိုကြီးလဲ။ သူက ဘယ်သူလဲ။ ဘယ်နံပတ်က ပို့လိုက်တာလဲဆိုသော လဲပေါင်းများစွာကို ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမျက်မှောင်ကျုံ့ကာ အဖြေထုတ်နေမိပါသည်။ ကျွန်မနာမည်ကို ဘယ်သူက သိနေတာလဲ။ စဉ်းစားရင်းနဲ့ပင် အခန်းတွင် တစ်ချက်မသိမသာ ဝေ့ကြည့်လိုက်ပါသည်။ တစ်ယောက်မှ လည်း ငါနဲ့ သိတဲ့သူ မပါပါလား။ ကျွန်မ၏ သင်တန်း CODE NO.မှာ P.C.S (12)ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ ဘယ်ဘက်ဘေးရှိ No.(11)ပိုင်ရှင်မှာ အသက်(၄၀) ကျော် အန်ကယ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ညာဘက် နံဘေးမှ တစ်ယောက်မှာမူ (၁၀)တန်းကျောင်း သူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမဝတ်ဆင်ထားသော ကျောင်းဝတ်စုံနှင့် အတန်းတံဆိပ်များကြောင့် သူမသည် ကျောင်းဆင်းချိန်တွင် တစ်ခါတည်း သင်တန်းသို့ လာတက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဆို ကျွန်မအနီးမှ လူများလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့၊ ဘယ်သူများပါလိမ့်၊ ကျွန်မအတွေးမဆုံးသေးInbox ထဲသို့ စာတစ်စောင်ရောက်လာပြန်ပါသည်။
“ငါဘယ်သူလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားသွားသလား ကြည်ပြာ”ဟူသော စာအဆုံးမှာတော့ ဒုတိယ အကြိမ်အခန်းတွင်းသို့ ထပ်မံမျက်စိကစားလိုက်မိသည်။ အကုန်လုံးက ကိုယ့် COMPUTER ပဲ ကိုယ်အာရုံစိုက်နေကြပါလား၊ ကျွန်မလှမ်းကြည့်လို့ မြင်သလောက်ကတော့ တော်တော်များများ Web Site တွေမှာ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ ဇာတ်ကားတွေအကြောင်းကြည့်သူတွေကကြည့် ပြီး တချို့တွေကFile တွေ Downloadလုပ်နေကြလေသည်။ သေချာသည်ကတော့ ဤအခန်းတွင်းမှ တစ်စုံတစ်ယောက်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တန်းကာလဖြစ်သည့်အတွက် OUTLOOK EXPRESSကို အသုံးပြုကာ အခန်းအတွင်း၌ သာMessageပို့လို့ရအောင် ဖန်တီးထားခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Messageမှာလည်း ပေးပို့သူ၏ နာမည်မပါ ပါလား။ ဒါဆို CODE NO. ကရော အမှန်မဖြစ် နိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် CODE NO.သိပါက ထသွားပြီး စကားပြောစရာမလိုအောင်ပင် နေရာမှ လှမ်းကြည့်၍ပင်ပြောနိုင်သည်။ စက်များမှာတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး သိပ်မကွာဝေးသောကြောင့် ပင်။ ယခုပို့လာ သော CODE NO. က (၁)တဲ့။ ကျွန်မလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဟယ်၊ CODE NO.(၁) က ချာတိတ်လေးတစ်ယောက်ပါလား။ ဒီချာတိတ်လေးလောက်ကတော့ ကျွန်မကို နာမည်ခေါ်ကာ ရွယ်တူ တန်းတူလို ဆက်ဆံစရာအကြောင်းမရှိ၊ အလွန်ဆုံးရှိမှ (၁၅)(၁၆)နှစ်လောက်သာသာကလေး တစ်ယောက် ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်။
ဒီလိုနဲ့နေ့စဉ် ကျွန်မဆီကို စာပို့နေသောပုဂ္ဂိုလ်မှာမည်သူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အဖြေကိုကြိုးစားပမ်း စားမရှာချင်တော့ပါ။ တိုတောင်းလှသော သင်တန်းကာလဖြစ်သည်က တစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းကျောင်းသားအချင်းချင်းနောက်ပြောင်ကာ ပို့နေသည်ဟု ထင်မိသည်က တစ်ကြောင်း ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
အခန်း(၁) . . . အဆက်
ယနေ့သည် ကျွန်မတို့သင်တန်းကာလပြီးဆုံးသည့် (၁၄)ရက်နေ့မြောက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မလည်း နီးစပ်ရာခင်မင်သွားသူများအား နှုတ်ဆက်ကြောင်းMessageပို့နေဆဲမှာပင် . .
“ကြည်ပြာ၊ ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားသခင်မလေးရေ၊ မင်းမျက်နှာလေးကို ဒီနေ့က စပြီး အခုလို ခိုးကြည့်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားပြီးနော်၊ ဒါပေမယ့် မင်းဆီကိုတော့ ငါ့သဝဏ်လွှာလေးတွေ E-MAILနဲ့ မှန်မှန်ဆက်သနေမှာပါ။
“SENT FROM LONELYHEART”တဲ့။ သူနာမည်က Lonelyheart တဲ့လား၊ ဟွန်း၊ နောက်ဆုံးနေ့ကျ မှပဲ နာမည်သိရတော့တယ်။ ကျွန်မလည်း မဆိုင်းမတွပင်Create Mailမှာစာတစ်စောင်အမြန် ရိုက်ထည့်ကာ သူပို့လိုက်သော CODE NO.ကိုပင်REPLY ပြန်ပို့ပေးလိုက်သည်။
“ကျွန်မနာမည်ရော၊ E-MAIL ADDRESS ကိုပါ သိနေတာ မလွန်လွန်းဘူးလား၊ ကဲ ဒီလောက်တောင် ကျွမ်းနေရင် ကျွန်မရဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ အသက်ကို မှန်အောင်ပြော”
Inbox ၏ဘေးတွင်New Message(၁)ဆိုသော စာတန်းလေးသည် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
“ကြည်ပြာသစ်လွင်ဆိုတာKyaw Tour ကုမ္ပဏီရဲ့Tour-Guide တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အသက်က(၂၄)နှစ်ပါ၊ နေတာက ရန်ကင်း(၁၂)လုံးတန်းမှာပါ၊ အမေတစ်ခု၊ သမီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်”
ဟောတော့၊ မခံချင်စိတ်ကြောင့်သာမေးလိုက်သော မေးခွန်းဖြစ်နေသော်လည်း ကိုယ်တော်ချောက အတိအကျကြီးကို ပြောနေတာမှန်နေပါလား . . . ကျွန်မ၏လက်ချောင်းများက Keyboard ပေါ်မှ အက္ခရာစာလုံး(၆)လုံးပေါ်တွင်သာ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြေးကစားနေတော့သည်။
“Who are u?”
ကျွန်မသင်တန်းတက်နေသောရက်အတွင်း ကုမ္ပဏီမှတစ်နာရီစောဆင်းခွင့်ကို Boss ဆီမှတောင်း ထားသောကြောင့်ဟုကျွန်မတွင်အလုပ်ကြွေးများပုံကာ နေ့စဉ်ခေါင်းမဖေါ်နိုင်အောင် ကုမ္ပဏီတွင်သာ မက အိမ်အထိပါ အကြွေးများကို သယ်ကာရှင်းနေရပါသည်။ COMPUTER ထဲတွင်လည်းFileများလွန်းသဖြင့် Recycle Binခေါ် အမှိုက်ပုံးကလေးထဲသို့ ပို့ပစ်လိုက်ချင်တော့သည့် စိတ်များတဖွားဖွားပေါ်လာမိပေသည်။
အိမ်ရှိ COMPUTER ၌Internet မချိတ်မိခဲ့သည်မှာ သင်တန်းပြီးဆုံးသည့်နေ့မှ ငါးရက်မြောက် ကြာသောနေ့ဖြစ်သည်။
အားပါးပါး!Inbox ထဲမှာNewMessage(၂၅)တဲ့၊ ဘယ်ကများပို့လိုက်တာပါလိမ့်။
INBOX ကို Click ထောက်လိုက်တော့ ပွင့်လာပါပြီ။Messageတွေ၊ ဘာတဲ့ အို အားလုံး Lonelyheart ဆီက ပါလား၊ တစ်နေ့ကို ငါးစောင်နှုန်းနဲ့ ငါးရက်ဆိုတော့ (၂၅)စောင်ကြီးများတောင်၊ တယ်လည်းဇွဲကြီးတဲ့ ကိုယ်တော်ပါလား၊ ဧကန္တတော့ အလုပ်မရှိ၊ အကိုင်မရှိ ၁၀၉/၁၁၀ သမားလားမှ မသိတာ . .
စာတွေထဲမှာလည်း ဘာမှထူးထူးခြားခြားမပါပဲနဲ့များ၊ ဟယ် ပို့ထားတဲ့ E-card လေးကတော့ ချစ်စရာလေး၊ COFFEE ခွက်လေးနှစ်ခွက်ယှဉ်ပြီး U+Meတဲ့။ တီးလုံးလေးလည်း ပါသေးတယ်၊ အဲဒါမှ ခက်တာပဲ၊ မနေ့ကပဲ Wooferထဲကိုကြောင်သေးပန်းသွားလိှု့Speaker ကောင်းသွားရင် ပြန်နားထောင်လို့ရတာပဲ . . Pls reply me.တဲ့။ အင်းလေ သူတောင်ငါ့ကို အစောင်နှစ်ဆယ်(၂၀)ကျော်ကြီးပို့ထားသေးတာပဲ၊ တစ်စောင်တလေလောက်တော့ ပြန်ပို့သင့်ပါ တယ်လေ . Sorry Delay for Reply! ဆိုပြီး Subject မှာ ရိုက်ထည့်ကာ စာတစ်စောင်ပြန်ပို့ လိုက်ပါသည်။
ယခုဆိုလျှင် ကျွန်မမှာ ကုမ္ပဏီဆင်းသည်နှင့် ရေချိုး၊ ထမင်းစား၊ ဘုရားရှိခိုးစသည်ဖြင့် ကျွန်မ၏ နေ့စဉ်ဝေယျာဝစ္စများပြီးတွင် COMPUTER ရှေ့သို့ အချိန်မှန်မှန်ထိုင်တတ်လာပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ Boss ၏အရေးပေါ်အလုပ်များ၊ ဧည့်သည်များပေါ်လာပါက ဖုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရသောကြောင့်Internet သုံးတာ နောက်ကျသည့်နေ့များလည်း ရှိသည်။ ကျွန်မ၏ COMPUTER မှာ Dial-up Connection ဟု ခေါ်သော အိမ်ဖုန်းလိုင်းအား Moderm ဖြင့် ချိတ်ကာ ဆက်သွယ်အသုံးပြု ရသောInternet ဖြစ်လေသည်။
အခန်း(၂)အဆက် . .
“ကြည်ပြာ၊ ဒီနေ့ဘယ်သွားနေလို့လဲ၊ မင်း E-MAILကို ငါမျှော်နေတာ (၂)နာရီကျော်သွား ပြီ”
“ဘယ်မှမသွားပါဘူး lonelyheart ရယ်၊ Over-time ရှိလို့ပါ၊ ပြင်သစ်က ဧည့်သည်တွေ သတ်မှတ်ရက်ထက်စောပြီး ရောက်လာလို့ လေဆိပ်မှာ သွားကြိုနေရလို့ပါ”
“မင်း CHATTING ထိုင်တော့ ဘယ် Site သုံးသလဲ။ ငါတို့ တစ်တွေ E-MAIL ပို့တာထက် CHATTING ထိုင်တာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်၊ စကားပြောရတာ ပိုသွက်တာပေါ့”
“ကြည်ပြာက CHATTING တစ်ခါမှ မထိုင်ဖူးဘူး၊ သူငယ်ချင်းတွေပြောတာတော့ ကြားဖူး တယ်၊ ဘယ် Site ကိုသုံးရမလဲ သင်ပေးလေlonelyheart”
“OKဒါဆို တတတ.ါညေါသညခငအပ.ခသာ ဆိုပြီး Address Bar မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်၊ ပြီးရင် Page ကျလာလိမ့်မယ်၊ အဲဒီမှာ Chat အထဲဝင်လို့ရမှာ”
ကျွန်မလည်း သူပြောတဲ့အတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ကြည့်ရာ Account တစ်ခုရကာ Memberတစ်ယောက်ဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက်
“ရပြီလား ကြည်ပြာ၊ User Name က ဘာလဲ၊ ကြည်ပြာပဲလား”
“မဟုတ်ဘူးlonelyheart ၊ User Name ကWhit Angle ၊ နာမည်က ကြည်ပြာသစ် လွင်ဆိုပေမယ့် တို့က အဖြူရောင် CRAZY လေ”
“ကောင်းပါပြီ lonelyheart လေးရဲ့White Angle လေးရယ်”
ကျွန်မမှာ ဟန်မဆောင်နိုင်ဘဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်အော်ရယ်လိုက်မိတော့သည်။ ဘယ်လိုမှ လူမှန်းလည်းမသိ၊ ဘယ်ကလာမှန်းလည်း မသိပဲနဲ့ ခင်နေတာကြာပြီဆိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ့အကြောင်း ကျွန်မတစ်ခါမှ မမေးကြည့်ဖူးပါ။ နဂိုကတည်းက အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူပီပီ သူ့အကြောင်း များကိုလည်း ထူးထူးထွေထွေမသိချင်သေး။
ဒီနေ့တော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ကိုယ်တော်ချောက သူ့အကြောင်းတွေကို ကျွန်မအား မေးခိုင်းနေပါ သည်။ ပြောပြချင်ရင် သူ့ဘာသာသူပြောပါလား၊ ကျွန်မကပဲ တကူးတက သူ့ကိုမေးရဦးမယ်၊ တော်တော်လည်းလာတဲ့သူ၊ ပဟေဋ္ဌိပေါင်းများစွာနဲ့ ထူးဆန်းသော လူသားစာရင်းဝင်အဖြစ် ဂရင်း နစ် စာအုပ်မှာ မှတ်တမ်းပဲတင်ရတော့ မလိုလို၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ကျွန်မ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် Profileကို အခိုင်အမာသိထားသူတစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ-တက္ကသိုလ်တက် တုန်းက ကျွန်မ၏ ရည်းစား အကြောင်းပင်၊ SECOND YEAR မှာ လူတစ်ယောက်နှင့် ကျွန်မချစ်သူ တွေဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော်ထိုလူမှာ ပိုက်ဆံချမ်းသာသော အသိုင်းအဝိုင်းမှဖြစ်သည့်အပြင်ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းမရှိပဲ မိဘပိုက်ဆံထိုင်ဖြုန်း နေသော လူ့ဘော်ကြော့တစ်ဦးဖြစ်သဖြင့် ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်၏ ချစ်သူသက်တမ်းမှာ SECOND YEAR စာမေးပွဲမဖြေခင်မှာပင်ပဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့လေသည်။ ယခုထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဤအကြောင်းများကိုပင် ခရေစေ့တွင်းကျသိနေသဖြင့် ကျွန်မမှာ အထူးပင်အံ့ဩရပါ သည်။ ကျွန်မကြည်ပြာသစ်လွင်ဆိုသော မိန်းမတစ်ယောက်သည် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနိုင်ငံကျော်တစ်ဦး မဟုတ်သည့်အပြင် အောင်မြင်ကျော်ကြား နေသည့် အဆိုတော်တစ်ဦးလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျောင်း တုန်းကသာ တက္ကသိုလ်မှာရွေးချယ်သော “Major Queen" အလှမယ်ဘွဲ့ကိုသာရရှိထားသော သာမန် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုသည်မှာ လည်း ကျွန်မထက်လှသော သူများSECOND YEAR ရောက်မှ ကျောင်းကိုပြောင်းလာပြီး “င်္MAJOR QUEEN”ဟုခေါ်သော “မောင်မယ်သစ်လွင်ပွဲ”ကို မမီလိုက်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်မ၏ ရုပ်ရည်မှာ မြန်မာဆန်သော သာမန်ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပြီး ကျွန်မငယ်စဉ်ကတည်းက မြတ်နိုးစွာ ထားသော ဒူးထောက်ခွက်အထိရှည်လျားလှသော ဆံပင်ရှည်ကြီးများကြောင့် ကျွန်မ၏ အလှမှာ မဆိုစလောက် ပေါ်လွင်ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ကျွန်မ၏ မျက်လုံးဝိုင်းကြီးကို သဘောကျပါသည်တဲ့၊ ဟုတ်လားတော့ မသိပါ၊ ထူပိန်းလှသော မျက်ခုံးမွေးများအောက်တွင် မျက်နက်ဝန်းဟုသူခေါ်သော ကျွန်မ၏ မျက်လုံးပြူးကြီးများကြောင့် အမေက ကျွန်မကို “ဇီးကွက်မ” ဟု ချစ်စနိုးနှင့် ခေါ်တတ်ပါသည်။
“White Angle ဒီနေ့ဆိုရင် ကိုယ့်တို့နှစ်ယောက် မိတ်ဆွေဖြစ်လာတာ(၂)လပြည်သွားပြီ။ မင်းအခုချိန်အထိလဲ ကိုယ့်အကြောင်း မမေးသေးဘူးနော်၊ ကိုယ်ကလည်း လူတစ်မျိုးကွ၊ သူများ အမေးပဲနဲ့ အဖြေကြိုမပြောတတ်ဘူး”
ဟုတ်ပါရဲ့၊ ဒီလိုဆိုတော့လည်း အားနာပါးနာနဲ့မေးရတော့မှာပေါ့ . . သူက ကျွန်မကို CHATTING ဝင်တတ်အောင် သင်ပေးထားတဲ့ ကျေးဇူးက ရှိနေတော့ . . ကဲlonelyheartရဲ့ နာမည်အရင်း၊ အဖေ၊ အမေနာမည်နဲ့ FAMILY အကြောင်းကနေစလိုက်ကြရအောင်။
“ကိုယ်နာမည်က စည်သူထွဋ်ခေါင်၊ အသက်က(၂၅)၊ မင်းထက်တစ်နှစ်ကြီးတယ် အဖေတို့ အမေတို့ကူဗ မှာ တာဝန်ကျနေကြတယ်။ မင်းနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်အဖေက သံရုံးအရာရှိတစ်ဦးပါ။ ညီလေးကိုတော့ ကြည်ပြာသိမှာပါ။ ကြည်ပြာ့ဆီကိုMessageတွေ ကိုယ့်ကိုယ်စားပို့ပေးခဲ့တဲ့ CODE NO(1)က ညီလေးလေ။ သူ့ကိုခုတုံးလုပ်ပြီး ကြည်ပြာ့ကို ခြေရာဖျောက်ထားရတာလေ . . ဟဲ ဟဲ”
အမယ်လေးနော်၊ တတ်လည်းတတ်နိုင် ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေ၊ ဖြေသွားတာစုံနေတာပဲ ဪသာ်၊ အရေးကြီးတာကျန်သေးတယ်၊ အလုပ်အကိုင်ဒီအသက်အရွယ်မှာတော့ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုရှိ ရမှာပဲ တော်ကြာသူပြောတဲ့ အတိုင်းဆိုရင် ဒင်းက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲကပဲဖြစ်ရမယ်၊ ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရည်းစားလို ၁၀၉/၁၁၀ ဆိုလို့ကတော့ ဂျောင်းပဲ။ ကျွန်မ၏ အယူအဆကတော့ အသက်(၂၀)ပြည့်ပြီဆိုရင် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့လူမှ လူပီသမှာပါ။ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်က အမေတစ်ခု၊ သမီးတစ်ခုဘဝဖြစ်သည့်အပြင် မေမေ့၏ ကျောင်းဆရာမဝင်ငွေလေးနဲ့ ကျွန်မကို ဘွဲ့ရသည်အထိ ပညာတွေသင်ပြေးခဲ့သည့် မေမေ့ကို ကျွန်မတလှည့်ပြန်ပြီး ကျေးဇူး ဆပ်ချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျောင်းမပြီးခင်FinalYear မှာကတည်းက ဤကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ရနိုင်အောင် ကျွန်မ language များကို လက်လှမ်းမီသလောက် သင်ကြားရင်းဘွဲ့ရပြီး သည်အထိ ကျွန်မမျက်နှာမှာစာအုပ်နှင့်မခွာခဲ့ရပါ။
ကျွန်မက မေးကြည့်တော့ “ကိုယ့်အလုပ်က Export,Import ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ကြီးကြပ် ရေးမှူးသဘောပေါ့၊ ကိုယ့်ဦးလေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ကြီးကြပ်ရေးမှူးသဘောပေါ့၊ ကိုယ့်ဦးလေး ကုမ္ပဏီဆိုတော့လေ”
“ရှင်က ကြီးကြပ်ရေးမှူးလည်းပြောသေးတယ်၊Internet သင်တန်းလည်း လာတက်သေးတယ်၊ ရှင့်ကိုကြည့်ရတာ သင်တန်းလာတက်တာ၊ နဂိုကတည်းက ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ သဘောမှာရှိတယ်၊ သင်တန်းသားရောဟုတ်ရဲ့လား၊ နည်းပြဆရာများဖြစ်နေသလား Lonelyheart” ကျွန်မစကား အဆုံးမှာတော့ . .
“ံ Ha! Ha! Ha! my lovely sweetheart White Angle! ရယ်။ မင်းဒီလောက်တော်လိမ့်မယ် လို့ ကိုယ်မထင်ထားမိဘူးကွာ။ Right! မင်းပြောတာ မှန်တယ်၊ ကိုယ့်ညီလေးက Counter-Strike ပစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ ကိုယ်ကခြေငြိမ်အောင် အိမ်မှာ Network Game ဆိုင်အသေးစားလေး ဖွင့်ပေးထားရတာကွ၊ ကိုယ့်ညီလေးက နည်းနည်းဆိုးချင်တဲ့သဘောမှာရှိတယ်၊ အေးလေ သူ့အနေနဲ့ကျတော့လည်း ပြေးကြည့်မှ မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရှိတာဆိုတော့ နွဲ့ဆိုးဆိုးချင်မှာပေါ့။ နောက်ပြီး သူနဲ့ကိုယ်နဲ့က (၉)နှစ်ကျော်တောင်ကွာတာဆိုတော့ ကိုယ်က သိပ်ချစ်တာကွ၊ ကိုယ့်ညီအကြောင်းပြောနေတာနဲ့ပဲ Apple မှာ သင်တန်းလာတက်တဲ့အကြောင်း မရောက်တော့ဘူး၊ အတိုချုပ်ပြောရရင် Promotion Cardတွေကလည်းရ၊ ကိုယ့်ညီလေးသင်တန်း ချိန်တွေကို အကြိုအပို့လုပ်ပြီး ထိုင်စောင့်နေရမယ့် အတူတူ ကိုယ်လည်းအလုပ်နည်းနည်းအားနေ တာနဲ့ တစ်ခါတည်းဝင်တက်လိုက်တာကွ”
သူပြောမှပဲ သူ့ညီလေးဆိုသော ချာတိတ်လေးကို မျက်လုံးထဲပြေးမြင်လာမိတော့သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ဝ၀ဖိုင့်ဖိုင့်လေးနှင့်လိုက်ဖက်လှသော မျက်နှာဖောင်းဖောင်းနှင့် ချာတိတ်လေးသည် ကျွန်မသူ့ခုံကို လှမ်း၍ကြည့်တိုင်း ချစ်စဖွယ်မျက်နှာလေးမှာ မလုံမလဲပြုံးကာ ခေါင်းလေးငုံ့ငုံ့ထားတတ်ခြင်းကြောင့် အပြစ်ကင်းသော မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးကို ကျွန်မအမှတ်ရနေမိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အဲဒါကြောင့် ကလေးလေးက ငါသူ့ကို ကြည့်တိုင်းခေါင်းလေးငုံ့ငုံ့သွားတာဖြစ်မယ်။ ကလေး ကို ပျက်စီးရေးလမ်းကြောင်းတွေသင်ပေးနေတဲ့လူ . . .
“ဟုတ်ပါပြီ၊ ဒါဆို ကျွန်မကို ဘယ်လိုစပြီးသိရတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းစမ်းပါဦး”
“ကြည်ပြာသင်တန်းကို ပထမဦးဆုံးလာတက်တဲ့နေ့ကို မှတ်မိလေးလား၊ သင်တန်းသားတွေ အားလုံးစုံမှ ဆံပင်ရှည်ကြီးတရမ်းရမ်းနဲ့ ဘိုသီဘတ်သီအခန်းထဲဝင်လာတဲ့ ကြည်ပြာ့ပုံစံကြောင့် ကိုယ်သတိထားမိသွားတာ”
ဟုတ်ပါရဲ့၊ အဲဒီနေ့က သင်တန်းပထမဦးဆုံးတက်ရမယ့်နေ့ဆိုတော့ ရုံးကနေ တစ်နာရီကြို ဆင်းခွင့်ပေး ပေမယ့် ကပ်စီးနည်းပြီးချွေတာတတ်သော ကျွန်မကတော့Busကားမစီးပဲ သုဝဏ္ဏရှိ ကျွန်မ၏ ကုမ္ပဏီမှသည် ပန်းဆိုးတန်းရှိ သင်တန်းသို့ ပေသီးခေါက်ကာ ကျြကားတိုးစီးမိသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညနေစောင်းပြီမို့ Bus ကားကလည်း လူကျပ်ချိန်၊ ကျွန်မမှာ ထမင်းခြင်းက တစ်ဖက်၊Fileတွဲများက တစ်ဖက်အပြင် ကျွန်မ၏ ရှည်လျားလှသော ဆံပင်ရှည်ကြီးများက ကျွန်မကို ဒုက္ခလှလှကြီးပေးလေတော့သည်။ မှတ်တိုင်ရောက်ပြီမို့ ဆင်းချင်ဇောနဲ့ ကမန်းကတန်းပြေး ဆင်းကာမှ ဆံပင်ရှည်ကြီးက ကျွန်မအနောက်ဖက်မှ အန်တီကြီး၏ ချိုင့်ကြားတွင် ညှပ်ထားသော ခေါက်ထီးရိုးများကြားတွင် ငြိတွယ်နေလေသည်။ ထိုနေ့က သင်တန်းရောက်တော့ ကျွန်မမှာ ချွေးများပြန်ပြီးမောနေသေးသည်။ Air Con အခန်းထဲမှာမို့လို့သာ တော်ပေတော့သည်။ သူပြောလိုက်မှ ကျွန်မမှာ အနည်းငယ်ရှက်သွားမိရင်း . .
“ဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့ ကျွန်မအကြောင်းတွေသိတာ မရိုးသားဘူး”ဟု ကျွန်မမှာ အရှက် ပြေပြောလိုက်ရလေသည်။ သူကလည်း အားကျမခံစွာဖြင့်
“ဒါကတော့ကွာ Knowledge Ageကြီးထဲမှာ လူတစ်ယောက်အကြောင်းသိဖို့က မခက်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ ပိုတောင်လွယ်သေးတယ်”တဲ့။
ကျွန်မသည် သူ့ကိုလူကိုယ်တိုင်မမြင်ဖူးသည်မှအပ သူ၏အကြောင်းများ၊ စိတ်ဓာတ်များကို လေးစားဖွယ်ရာကြားသိရလေသည်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်မှာ ညစဉ်ညတိုင်းတစ်နေ့တာတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များကို အပြန်အလှန်ရင်ဖွင့်ရင်း၊ ရင်းနှီးသွားကြလေသည်။ တစ်ခါကဆိုလျှင် လမ်းမှာ အဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီးစုံတွဲ Busကားမှတ်တိုင်တွင် ကြာမြင့်စွာစောင့်နေရသည်ကို သူ၏ ကူညီချင်သည့်စိတ်ထားကြောင့် မကြည့်ရက်သဖြင့် သူ၏ကားဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်ပို့ခဲ့သည့်အပြင် အဖိုးအိုကြီးမှာ အိမ်သို့ အရောက်တွင် အသက်ကြီးပြီး နွမ်းပါးသည့်ဒဏ် ကြောင့် အမောဖောက်ကာ သူ့မျက်စိရှေ့တွင်ပင် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ကာ ဆုံးသွားလေသည်။ သူ့ခမျာ စေတနာထားပြီး ပို့ကာမှ အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် အသုဘ ကိစ္စများကို ကိုယ်တိုင်၊ သူ့ကားဖြင့်အစအဆုံးကူညီပေးခဲ့ပြီး နာရေးစရိတ်ကိုပါ ထုတ်ပေးခဲ့သေး သည်။ ကျန်ခဲ့သည့်အဖွားကြီးမှာ ကျေးဇူးတင်လွန်းသဖြင့် သူ့အား “သား၊ သား”ဟု နှုတ်မှ အော်ကာ ဖက်၍ ငိုနေသဖြင့် သူ၏မိခင်ကို လွမ်းဆွတ်သတိရမိကြောင်း ပြောပြလေသည်။
ကျွန်မနှင့်သူInternet မှတဆင့် ခင်မင်လာသည်မှာ (၉)လကျော်၍ (၁၀)လအတွင်းသို့ ရောက်လာချိန်တွင်
“ကြည်ပြာ၊ မင်းစိတ်မဆိုးရင် ကိုယ်တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုချင်တယ်၊ ကိုယ်မင်းနဲ့ အပြင်မှာ တွေ့ခွင့်ရချင်တယ်၊ မင်းခွင့်ပြုနိုင်မလား”
အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် ကျွန်မနှင့် ခင်မင်မှုအတိုင်းအတာကြောင့်ပင် ကျွန်မလည်း သူ့မျက် နှာကို မြင်ဖူးချင်ပါသည်။ ကျွန်မ၏ စိတ်မှန်းဖြင့် သူ့ပုံစံကို အကြိမ်ကြိမ်ပုံဖော်ခဲ့ပေါင်းများပြီ။ ကျွန်မလိုပဲ အရပ်ရှည်ရှည်၊ အသားညိုညိုထဲကလား။ ဒါမှမဟုတ် အရပ်ပုပု၊ အသားဖြူဖြူထဲက လား၊ မျက်နှာပုံစံကရော၊ အဝိုင်းလား၊ လေးထောင့်လား။ သွယ်သွယ်ချွန်ချွန်လား၊ အင်း စဉ်စားရတာ ပင်ပန်းပါတယ်လေ၊ လူချင်းတွေ့လိုက်တော့ စာရင်းအေးရော။ နို့မို့ဆိုရင် ကျွန်မမှာ မျက်နှာပင် မမြင်ဖူးသည့် လူတစ်ယောက်နှင့်(၁၀)လနီးပါးခင်မင်မှုတွေပြုလာပြီးကာမှ သူ့မျက်နှာ ကို တစ်ခါလောက်တော့ တွေ့ဖူးသင့်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းကြီးတွေ့ချင်ပါတယ်ဟု ပြောလို့ တော့ မဖြစ်သေးပါဘူး၊ သိက္ခာကျတယ်၊ နည်းနည်းလောက်တော့ ဈေးကိုင်ထားဦးမှ . . ဒါဆို ရင် ဟုတ်ပြီ! သည်းခံလက်စနဲ့ ဆက်ပြီးတစ်လလောက် သည်းခံလိုက်ပါ့မယ်
“OK! lonelyheart အခုလာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ Second Weekထဲမှာ ရှင်နဲ့တွေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်၊ ဒီရက်ပိုင်းတော့ ကျွန်မလည်း ဧည့်သည်တွေများလို့ အလုပ်ရှုပ်နေဦးမှာဆိုတော့လေ”
ကျွန်မမှာ သူနှင့် ခင်မင်သည့်ကာလအတွင်း ပုဂံ-ညောင်ဦးသို့ ဧည့်သည်များအားလိုက်ပို့ ရသေးသည်။ ပုဂံမှာ တစ်ပတ်ကျော်ကျော်ကြာသွားသည့်အချိန်တွင် ကျွန်မသူ့ကို သတိတရဖြစ် နေမိသေးသည်။ ညစဉ်တိုင်းလည်း သူနှင့် CHATTING ထိုင်ငသည့်အချိန်များကို သတိရကာနေမထိ ထိုင်မသာဖြစ်နေတတ်သည်မှာ သံယောဇဉ်ကြောင့်လား၊ မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်၊ ကျွန်မမှာ သူ့ကို မမြင်ဖူးသေးတာ . . သိပ်မကြာတော့ပါဘူးလေ၊ တစ်လဆိုတာ ခဏလေး . .
“င်္Feb: Second Week ကတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ ရက်ကိုသတ်မှတ်ဦးလေ၊ ဒါမှ ကိုယ့်အလုပ် လေးကို ကြိုရှင်းထားလို့ရအောင်”ဟု သူကပြောလေသည်။
“ဒါဆို အမှတ်တရလည်းဖြစ်အောင် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၄)ရက်နေ့ ကျွန်မမွေးနေ့မှာ တွေ့ကြမယ် လေ၊ မွေးနေ့အမှတ်တရ မုန့်လည်းစားရင်းပေါ့”
“ကောင်းလိုက်တဲ့ Idea ကွာ၊ အဟား . . ဒါဆိုရင်တော့ အပိုင်ပဲ၊ ကိုယ်ကြည်ပြာကို ဖွင့်ပြောချင်လို့ မြိုသိပ်ထားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကြည်ပြာနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မှပဲ ကြည်ပြာ့ မျက်ဝန်းလေးကို သေသေချာချာကြည့်ပြီး ပြောတော့မယ်ကွာ”
ဘုရား . . ဘုရား . . ကျွန်မရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ ပါလား၊ ကျွန်မရှင့်မျက်နှာကို မမြင်ဖူးတာက လွဲလို့ ရှင့်စိတ်ဓာတ်နဲ့ ရှင့်အကြောင်းတွေ ကျွန်မသိခဲ့ရတယ်။ ရှင်သာ မုသားမသုံးခဲ့ဖူးဆိုရင်တော့ ရှင်ပြောမယ့် စကားတစ်ခွန်းကို အလေးအနက်နားထောင်ပေးဖို့ ကျွန်မစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။
ယနေ့ သူနဲ့ ကျွန်မချိန်းထားတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၄)နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ၏ မွေးနေ့လည်း ဖြစ်သည်မို့ မိုးမလင်းခင်ကတည်းက အိပ်ရာမှထကာ ဘုရားရှိခိုးပြီး ပုတီးစိပ်နေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မေမေ့ကို အိပ်ရာထဲအထိ သွားကန်တော့တာ အိပ်မောကျနေသော မေမေ့ပါးလေးကို ညင်သာစွာ နမ်းပြီး ခြေသံမကြားအောင် ခြေဖျားလေးထောက်ကာ အခန်းထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်။ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ကျွန်မမွေးနေ့သည် ယနေ့လိုပင် ဘုရားဝေယျာဝစ္စများလုပ်ကာ ဘုရားဝတ်ပြုပြီးသည်နှင့် ကျေးဇူးရှင်မေမေကို ဦးချနေကျပင်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ရိုးရှင်းလှသော ကျွန်မမွေးနေ့ နံနက် ခင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ ယခုနှစ်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားကျွန်မ စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါသည်။ ရေချိုး ပြီးသည်နှင့်မှန်တင်ခုံရှေ့တွင် ကျွန်မ၏ မျက်နှာကိုTwo -Way Cake အနည်းငယ်လိမ်း၊ နှုတ်ခမ်း နီပန်းနုရောင် Gloss ကို နှုတ်ခမ်းပါးလေးပေါ် အသာပင့်တင်ပြီး ဆံပင်ရှည်ကြီးကို အပေါ်တစ်ပိုင်း ဖဲကြိုးစလေးနှင့် အသာချည်ကာ ချည်သားမြန်မာအင်္ကျီရင်စေ့ပန်းရောင်လေးနှင့် လိုက်ဖက်စွာ အပွင့်နုတ်သေးသေးလေးများဖြင့် အလှဆင်ထားသော လုံချည်လေးကို ဝတ်ဆင်လိုက်သည်နှင့် ကျွန်မ၏ အလှပြင်ခန်းပြီးဆုံးသွားစေသည်။
မှန်ရှေ့တွင် တစ်ကိုယ်လုံး လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးသည်နှင့် လက်ကိုင်အိတ်အဖြူလေးကို ကိုင်ကာ သူနှင့်ချိန်းထားသော နေရာလေးသို့ ထွက်လာခဲ့လေသည်။ ကျွန်မမွေးနေ့တွင် ခွင့်တစ်ရက်တင်ထား သောကြောင့် ကျွန်မ စိတ်လက်ပေါ့ပါးကာ သူပြောမည်ဆိုသော စကားကို နားထောင်ခွင့်ရချင် ပါသည်။ အို ငါဘာဖြစ်လို့တွေးနေတာလဲ။ ဟိုကဖြင့် ဘာပြောမယ်မှန်းလည်းမသိသေးဘဲနဲ့ တော်ကြာ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ပိုက်ဆံချေးချင်လို့ပါဆိုရင် အရှက်တော့ကွဲရချည်ရဲ့ အဟီး . .
ဟင်! ဆေးရုံကားတွေပါလား၊ အရေးပေါ်ဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့်၊ ကျွန်မစီးလာသောTaxi ကားသည် မီးပွိုင့်ထိပ်တွင် ရပ်လိုက်သည်နှင့် ကျွန်မ၏ မြင်ကွင်းထဲသို့ အရေးပေါ်လူနာတင် ယာဉ်များ ဖြတ်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။ ကျန်းမာကြပါစေ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ကြပါစေဟုလည်း စိတ်ထဲမှ ရေရွတ်ကာ ဆုတောင်းလိုက်မိသည်။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ (၈း၂၀)မိနစ်။
ချိန်းထားသောနေရာသို့ ဝီရိယကောင်းစွာဖြင့်ရောက်ရှိလာချိန်မှာ (၈း၄၀)မိနစ်သာရှိပါသေးသည်။ မိမိကသာ ဇွဲကြီးစွာ မျှော်နေမိပေမယ့် ကိုယ်တော်ချောက တခေါခေါလူကြီးဖြစ်နေရင်တော့ ဒုက္ခ ပဲ! အင်းလေ အဲဒီလိုဆိုရင်လည်း တချို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ . . .
နံနက် (၉)နာရီ (၁၅)မိနစ်
ဟွန်း! ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ လာမယ့်သူကလည်း နောက်ကျလိုက်တာ . . . အင်း အခုမှ (၁၅)မိနစ်ပဲကျော်သေးတာပါ၊ မီးပွိုင့်မှာကားတွေကျပ်နေတာ နေမှာပေါ့၊ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း တောင်စဉ်ရေမရ လျှောက်တွေးကာ စောင့်နေခဲ့သည်မှာ နံနက်(၁၁း၄၅)မိနစ်ပင်ရှိသွားခဲ့လေပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူတချို့ကလည်း ရှေ့တစ်မျိုး၊ နောက်မှတစ်မျိုး စူးစမ်းသောအကြည့်မျိုးစုံတို့ ဖြင့် မျက်စိစားပွဲထိုင်နေကြတော့သည်။ အများအမြင်မှာတော့ ဟုတ်ပါသည်။ နံနက်(၈း၄၀)မိနစ် မှသည် ယခုမွန်းတည့် (၁၂းဝ၀)နာရီတိုးသွားသည်အထိ တစ်ယောက်တည်းထိုင်စောင့်နေတော့ လည်း . . .ကျွန်မမှာတော့ ရှက်ခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ ဝမ်းနည်းသည့်စိတ်နှင့်ပင် ထိုနေရာ မှာပင် ငိုကြွေးမိလေတော့သည်။
ကျွီ . . အီ . .အီ . . အား !
ကား Break အုပ်သံကြားမှ ရုတ်တရက်ကားခေါင်းချင်းဆိုင်ကာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ ဝင်ဆောင့် သော ဒိုင်နာကားနှင့် ရှေ့ကားကိုကျော်တက်လာသောCHESER ကားအဖြူလေးတို့၏အဖြစ် မှာ မြင်မကောင်း၊ ရှုမကောင်း၊ ကားခေါင်းခန်းထဲမှ လူငယ်လေးကတော့ မှန်ကွဲများအောက်တွင် မနည်းဆွဲထုတ်ကာ အရေးပေါ်ကားပေါ်တင်တော့ အသက်မရှိတော့။ နေရောင်ခြည်နုနုလေးနှင့် လှပနေသော နံနက်ခင်းလေးနှင့် မလိုက်ဖက်စွာ ယာဉ်မောင်းလူငယ်လေး၏ ခန့်ညားလှသော မျက်နှာလေးပေါ်တွင် မှန်ကွဲစများက မြင်မကောင်းလောက်အောင် အကျည်းတန်သွားသည်။ သွေးအလိမ်းလိမ်းနှင့် သူ့လက်ထဲမှာတော့ လက်စွပ်ဘူးလေးနှစ်ဘူးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ် ကိုင်ထားဆဲ . . .
ကိုယ်လာပြီ ကြည်ပြာရေ၊ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့ အိပ်မက်လေး ဒီနေ့မှာ တကယ်မက်ခွင့်ရ တော့မှာ၊ ကိုယ်တစ်ညလုံး မအိပ်ပဲ ကြည်ပြာကို ပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေကို စဉ်းစားရင်း မိုးလင်းအောင်ထိုင်စောင့်နေတာ ည(၁၂)နာရီကျော်တော့ . .
Valentine E-Card လေးတောင် ကိုယ်ပို့ထားလိုက်သေးတယ်၊ အချစ်အတွက် မောင့်ရဲ့ ဦးဦးဖျားဖျားလက်ဆောင်လေ၊ ကိုယ်မနက်လေးနာရီမထိုးခင်ကတည်းက ဘုရားရှိခိုး၊ ရေချိုးပြီး သည်နှင့် ညီလေးကျောင်းသွားဖို့ ပြင်ဆင်ပေးရင်း အချိန်ဖြုန်းနေခဲ့တာ နံနက်(၈)နာရီ ဒေါင်ဆို တာနဲ့ ကိုယ်အိမ်ကစထွက်တာလေ၊ ချိန်းထားတဲ့ နေရာလေးကို ကိုယ်အစောကြီးကြိုရောက်ချင် လွန်းလို့ တစ်ညလုံးမအိပ်ပဲ ဒီအချိန်လေးကို စောင့်နေတာ . .
ဟာကွာ! အရေးထဲမှာ မီးပွိုင့်ကလည်း ကြာလိုက်တာကွာ။ နံနက်(၈း၁၀)မိနစ်တောင်ဖြစ်နေပြီ၊ စောစောရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုမှကွာ ရှေ့ကဒိုင်နာကားက ဘာလုပ်နေတာလဲ! ရှုပ်တယ်ကွာ ကျော်တက် မယ်၊ တီ . . တီ . . တီ . . အရေးထဲ ဏါ့်လာနေသေးတယ်၊ ဪသာ် . .မေမေဆက်တာနဲ့တူ တယ်။ နောက်လဆိုရင် ဖေဖေခွင့်ရလို့ ပြန်လာကြတော့မှာပဲ။ ငါအရမ်းကံကောင်းနေပါလား၊ မေမေတို့ ပြန်လာမယ့် အချိန်မှာ ချစ်သူအသစ်လေးနဲ့လည်း မိတ်ဆက်ပေးရင်း မိန်းမတစ်ခါတည်း တောင်းခိုင်းရမယ်။ ကြည်ပြာလေးရယ် ချစ်လိုက်တာကွာ . . ကပိုကရိုလေးနဲ့ အမြဲလှနေတတ် တဲ့ မင်းလေးကို စတွေ့ကတည်းက ဒီကောင်ကြီးဈာန်ရှောသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရဦးမယ်။
ဟာ! ငါ့မျက်စိတွေ ဝေ၀ါးနေပါလား၊ တလောကလုံးအဖြူရောင်တွေချည်းပဲ၊ ဒါတွေက ဘာတွေလဲ ဝါဂွမ်းလိုလို၊ မြူလိုလိုနဲ့ အရာအားလုံးဖြူဖွေးနေတာပဲ။ လက်စွပ်ရော၊ ငါ့လက်ထဲမှာပဲ . . ကြည်ပြာလေးကို ချစ်ခွင့်ပန်ရင်း လက်ထပ်လက်စွပ်လေးပါ တစ်ပါတည်း ပေးချင်လို့ တစ်လလောက် ကတည်းက ကြိုမှာထားရတာ၊ ကြည်ပြာ့ဆီကို မရောက်သေးဘူးလားကွာ၊ အဖြူရောင်တွေက လည်း ရှုပ်လိုက်တာ . .
အခုမှပဲ ချစ်သူလေးဆီရောက်ပြီ။ ကြည်ပြာရော . .၊ တွေ့ပြီ၊ တွေ့ပြီ အပြစ်ကင်းလှတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ချစ်သူလေး၊ ဟင် ကြည်ပြာငိုနေတယ်၊ ဘာလို့ ငိုရတာလဲ အချစ်ရယ်၊ အချစ်နဲ့ တွေ့ချင်လွန်းလို့ ကိုယ်လည်း မိုင်ကုန်တင်ပြီး မောင်းလာတာ။ ဒါတောင် ဒိုင်နာကားကြီးက ပိတ်မိနေလို့ မနည်းကျော်တက်လာတာကွ၊ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်လာတာ နောက်ကျသွားတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါအချစ်ရယ် . . ကြည်ပြာ ကြည်ပြာ . . ကိုယ်ခေါ်နေတာ မကြားဘူးလား၊ ဘယ်ကို ထွက်ပြေးသွားတာလဲ။ ကိုယ်မင်းရှေ့မှာ ရောက်နေပြီလေ။ သိပြီ၊ သိပြီ . .အချစ်က စိတ်ကောက် ပြီးတော့ ငိုနေတာကိုး၊ ကိုယ် အချစ်ကျေနပ်တဲ့အထိ လိုက်ချော့ပါ့မယ်ကွာ . . ဟာကွာ! ဒီTaxiကားစုတ်ကလည်း လူနှစ်ယောက်လုံးမြင်နေရဲ့သားနဲ့ကြည်ပြာ့ကိုပဲ တင်သွားတယ်။ နှာဘူး ကျတဲ့ ဘဲကြီး . . အေးဆေးပါ။ ကိုယ်ကြည်ပြာ့အိမ်ကို သိနေတာပဲ။ ကိုယ့်ကားနဲ့ အိမ်အထိ လိုက်ပြီး ကျေနပ်အောင်အချစ်ကို တောင်းပန်ပါ့မယ်ကွာတာပဲ၊ ကိုယ့်ကားနဲ့ အိမ်အထိလိုက်ပြီး ကျေနပ်အောင် အချစ်ကို တောင်းပန်ပါ့မယ်ကွာ။
ကိုယ်လိုက်လာပြီ . . အချစ်ရေ . .
ဟာ! အရေးထဲ ခင်ဗျားတို့က ဘယ်သူတွေလဲ။ ဟင့်အင် မလိုက်ဘူး၊ မလိုက်ဘူးဟာ၊ လုံးဝမလိုက်ဘူး၊ ကျွန်တော့်အာခေါင်တွေကွဲမတတ်အော်တာတောင် အသံကထွက်မလာဘူး၊ ကျွန်တော့်ချိုင့်နှစ်ဖက်ကနေ ဝတ်ရုံဖြူကြီးနဲ့ လူသန်ကြီးနှစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုမပြီး အတင်း ဆွဲခေါ်သွားကြတာ ကြည်ပြာ့နောက်ကို လိုက်လို့ မမီတော့ဘူး။ ကြည်ပြာနဲ့ ကျွန်တော် ဝေးသထက် ဝေး . .ဝေး . . ဝေး ။
သစ္စာ+ဝဋ်ကြွေး+ကျိန်စာ = Valentine
" ချစ် ----- တယ် "